Khabiirka Cilmi-baarista ayaa sharraxaya waxyaabaha aad awoodi kartid inaad ku khaldanto Gaadiidka Suuq-geynta
Qalabka suuq-geynta ayaa ah geeddi-socodka farsameynta ficilada suuq-geyntaqalabka isgaarsiinta iyo software gaar ah. Qalabka suuq-geynta suuq-geynta wuxuu kaa caawinayaa sidii loo dalban lahaa tallaabooyinka soo noqnoqonaya, suuq-geynta, iyoqiyaasidda guulaha ficilada hadda socda.
Khabiirka Sare Adeegyada Dijital ah, Oliver King wuxuu sharxayaa sida loo fuliyo suuq-geynta suuq-geynta, si looga hortago qaladaadka soo socda
1. Fiirinta guud ahaan Emails
Khaladka ugu horreeya ee suuqyada badiyaa waxay sameeyaan waxay ku fikirayaan in soo noqnoqonayaanficilada suuq-geynta waa in ay la xiriiraan email-ka kaliya. Waxay faa'iido u leeyihiin bilowga. Guud ahaan, suuq-geynta suuqawaxay u adeegtaa istiraatiijiyad dabagal ah oo wanaagsan - ego aio coil review. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo kale oo suuq-geyn ah sida suuq-geynta iyo bulshadawarbaahinta. Ogaanshaha akhlaaqda qofeed iyo waxyaabaha la door bidayay, waxaad abuuri kartaa ogeysiisyo otomaatik ah, emails, ama farriimo toos ahsi ay u helaan waxyaabo la xidhiidha oo iyaguna daneynaya. Fiirinta emaylka oo keliya ayaa xaddidaya iibsashada macaamiisha inta badan daawadayaal badanaaraadinta maadada iyo joogitaanka ganacsiga oo dhan shabakadda.
2. Shakhsiyaadka ka baxsan
Shakhsiyeynta waa mid muhiim u ah sidii qof walboo kuugu soo diri lahaaliiska xiriirka ayaa waxyeeleyn kara ganacsiga. Macaamiishu waxay u baahan yihiin inay dareemaan qaas ah si ay u diraan farriimo isku mid ah iyaga oo aan wax ka qaban karin tan..Shakhsi ahaaneed waxay u baahan tahay cilmi-baaris iyo go'aaminta macaamiisha gaarka ah ee ay leeyihiin. Kadib samaynta cilmi-baaris, hagaajin mawduucwaa in la keenaa taas. Waqtiga uu socdo, mid ayaa laga yaabaa inuu doorto inuu hoos u sii dhigo deeqda adeegga.
3. Tixgelinta Booqashada Hogaaminta
Mararka qaarkood, qof kastaa ma la kulmo adeegyadda ganacsi. Suuq geyntaotomaatigga ayaa ka caawiya kooxda inay bartaan macaamiisha macquulka ah iyagoo isticmaalaya xeelado kala duwan. Waxay cadeeyneysaa cidda ay tahay in shirkadu la xiriirtoIyadoo, iyo sidoo kale, kuwan u qalma maalgashiga. Ganacsi waa inaysan dhexgelin macaamiisha iyo kuwa soo booqda ee aan u adeegaynin inay yihiin kuwo macquul ahayaa horseedaya istiraatijiyad horumarineed ee ganacsiga.
4. Aan Cabirin Hawlahaaga
Xaqiijinta suuq-geynta ayaa hubaal ah in ay waqti ku badbaadinayaan falalka dib-u-celinta. Sidoo kalewuxuu soo bandhigaa fursado uu ganacsaduhu uusan u malaynaynin inuu hore u yimi. Waa feejignaan inaad ku qaadato wakhti marmar dib loo eegowaxqabadka si loo ogaado sifooyinka shaqada iyo kuwa aan ahayn. Ka dib markii la ogaado khasaarihii suurtogalka ahaa ee suuqa kala iibsiga,ogaansho sida iyo sababta ay u dhaceen horumarinta qorshe hawleed. Hirgelinta xal suuqgeynta suuqgeynta iyoHaddii aad ku qanacsan tahay in shaqadu dhammeystirtay waa halis dhab ah.
5. Ahaanshaha Dhibaatada
Waa sahlan tahay in la isticmaalo qalabka suuq-geynta suuq-geynta haddii macluumaadka si sahlan loo isticmaalola heli karo. Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtogal ah in ay noqoto mid aad u ololeeya ololaha ololaha sida soo dirista wargelin badan ama kormeeridganacsiga. Habdhaqanka noocan oo kale ah wuxuu abuuraa falcelin aan fiicneyn oo lala yeesho dhagaystayaasha, ilaa dhibta sumcadda sumadda. Suuq geyntaGawaarida waxaa loola jeedaa in la abuuro hoggaan oo aan ka cabsi qabin. Waa lagama maarmaan in mulkiiluhu uu hirgeliyo mugga iyo inta jeer ee uu socdonuxurkiisu waa la bixiyaa